Dia mampiaraka ny teny arabo lehilahy. Yahoo Answers
Nihaona izany Arabo lehilahy izy haingana mba te-hiantso ahy ny gf toa tena mahaliana ny mijery tsaboina ahy toy ny andriambavy dia tena misokatra momba ny fiainana ankehitriny ny yr. taty aoriana dia nanomboka ny hiresaka indray aho fa manana olana aho nandre afovoany atsinanana ry zalahy ihany no hanambady ny foko sy ny fampiasana hafa ny zazavavy aho Hispanika taona. Nihaona izany Arabo lehilahy izy haingana mba te-hiantso ahy ny toa gf tena mahaliana ny mijery tsaboina ahy toy ny andriambavy dia tena misokatra momba ny fiainana ankehitriny ny yr. taty aoriana dia nanomboka ny hiresaka indray aho fa manana olana aho nandre afovoany atsinanana ry zalahy ihany no hanambady ny foko sy ny fampiasana hafa ny zazavavy aho Hispanika taona.
Ny toro-hevitra, be dia be ny Arabo ry zalahy play ny lalao, araka ny fitsipika ‘raha izy cheap, dia afaka mamitaka’, aza manaiky ho azy ary ho toy ny mafy loha toy ny ampondra, an’ohatra mazava ho azy, ary tena manao hoe, inona aho hoe, Arabo ry zalahy no omena avy ny fahazoana ara-batana miaraka amin’ny hafa ny firaisana ara-nofo eo amin’ny afovoany-atsinanana, ka ho any andrefana no karazana fafao fa ny tsy fananana, ka tandremo tsara, aza mba mahazo ny ara-batana miaraka aminy, Mandrakizay. Edit: raha ny marina, mety handinika indray ny fampandrosoana ny fifandraisana raha nampahafantatra anareo ny fianakaviany, dia izy no trustable lehilahy, heveriko. Nihaona izany Arabo lehilahy izy haingana mba te-hiantso ahy ny gf toa tena mahaliana ny mijery tsaboina ahy toy ny andriambavy dia tena misokatra momba ny fiainana ankehitriny ny yr. taty aoriana dia manomboka miresaka indray aho fa manana olana aho ve nandre afovoany atsinanana ry zalahy ihany no hanambady ny foko sy ny fampiasana ny zazavavy hafa.
Fa ny tsy marina, lol
Manana namana be dia be, izay mitondra ny datin ny Arabo ry zalahy sy ny maro ny namako no antsasaky ny Arabo antsasaky ny Aziatika. Heveriko fa ny mahazatra ny olona ny fomba fijery ny hafa, izany ara-dalàna, fa ny hevitra dia, tsy mino aho hoe ny Arabo matetika manana na inona na inona manohitra ny Hispanika ny olona. Arabo ireo olona ireo, toy ny samy hafa toy ny na inona na inona karazana olona. Aho Hispanika ihany koa, ary efa mitondra ny datin ny Arabo zazavavy nandritra ny roa taona. Raha ho mampiaraka, dia izy angamba no tsara tarehy maka ny fomba tandrefana. Eny, ny sasany amin’izy ireo ihany no te-hatory amin’ny vehivavy. Efa namaky izany ao amin’ny internet amin’ny zazavavy hafa. Noho izany, mieritreritra aho fa tsy tokony hanana firaisana ara-nofo mialoha, fara fahakeliny, ny enim-bolana. Raha toa ka izy ihany no mitady ny torimaso manodidina, izy tsy hiandry ela ity. Raha manao izany izy, dia izy no lehibe momba anao. Koa, raha izy no lehibe momba ny fanambadiana, azoko antoka dia farafaharatsiny ny hampahafantatra anao ny mpiray tampo amiko, raha tsy ny ray aman-dreny. Raha misy rahalahy, hampidirana azy ireo koa fantany fa raha messes manodidina, izy dia tsy maintsy mandoa vola ho azy. Matoky sy hiezaka ny hiresaka aminy amin’ny fomba firesany. Raha izy dia tony miresaka tony tsara ny andro. Ho vatany tahaka azy sy miezaka fotsiny mba hiresaka aminy, toy izany izy, dia olona iray hafa. Voalohany, miezaha mba ho namana ny, fa tsy mandany fotoana be dia be hanehoany ny fihetseham-ponao manoloana azy. Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Manao Amerikana hahatakatra fa izy ireo dia mbola tsy nahita fianarana noho ny tena mandroso ny firenena.
I USA Nd avy ny fito amby telo-polo firenena
← Karajia sy ny Resaka arabo maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana